Jilaaga Sanjay Dutt oo shan sano oo xabsi ah lagu xukumay
Published on March 21, 2013 by · No Comments www.simplesharebuttons.comShare dheh
Number of View: 1232Khamiis, Maarso 21, 2013 — Jilaaga caanka ah ee Bollywood Sanjay Dutt ayay maxkamad ku taalla dalka Hindiya ku xukuntay xabsi shan sano ah, kaddib markii lagu soo eedeeyay dembi la xiriira in uu ku lug lahaa qaraxii sanadkii 1993 ka dhacay Magaalada Mumbai ee dalka India.
Sanjay Dutt oo horay u soo qaatay xabsi ah hal sano iyo bar ayaa hadda xabsiga ku soo qaadan doona seddex sano iyo bar. Aktarka ayaa sharciga u ogol yahay in uu racfaan ka qaato xukunka ku dhacay, wuxuuna heystaa afar todobaad oo kaliya, haddii uusan racfaanka qaadanna wuxuu geli doonaa xabsiga lagu xukumay.
Golaha Zilla Ghaziabad ayaa ka codsaday Maxkamadda sare in Aktarka la sii daayo, iyadoo loo tixgelinayo howlo samafal ah oo uu horay u sameeyay, hayeeshee maxkamadda waa ay diiday arrintaas, iyadoo tixgelineysa muhiimadda ay maxkamaddu leedahay.
Warkan ku saabsan in aktarka xabsi lagu xukumay ayaa waxa si weyn uga xumaaday ehellada, asxaabta iyo taageerayaasha tira badan ee aktarka,waxayna walaashiis Priya Dutt ay sheegtay in aysan ogeyn wax ay tiraahdo iyo wax ay sameyso. Sidoo kale waxaa iyana shucuurtooda muujiyay dhammaan aktarrada shirkadda Bollywood.
Jilaaga Sanjay Dutt ayaa lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa qarax Mumbai ka dhacay 1993, kaasi oo ay ku dhinteen 250 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 700 oo ruux, iyadoo taasina ay sii dheer tahay in sanadkii 2006 gurigiisa laga helay hub.